Uru nke iji igwefoto na - ahụ maka ịdọ aka na ntị | Ngwọta OMG
A na-akpọ igwefoto Mkpuchi ahụ (BWV) (Video Worn Video) na-eje ozi dị ka vidiyo, igwe ọdịyo, ma ọ bụ ihe nlere onyonyo nke edobere maka ndị uwe ojii. Ofdị igwefoto dị iche iche nwere oke ojiji na ihe osise dị nta, nke a na-ejikarị dịka akụkụ nke akụrụngwa ndị uwe ojii. Ewezuga ndị uwe ojii, a na-ejikwa kamera ndị a n'ọtụtụ ọrụ dị ka azụmahịa, ahụike, ọgwụ, iji ndị agha, ndị nkịtị nwekwara ike iji igwefoto eyi, na akwụkwọ akụkọ. Otu akuko sitere na Nascent gosiputara ihe akaebe doro anya banyere ihe igwefoto mebiri emebi na ojiji nke obodo na ntụkwasị obi nke ndi uwe ojii.
Ezubere BWCs ka enwe ike n’ime otu n’ime akụkụ ahụ mmadụ atọ, dịka toso, okpu agha, ma ọ bụ iko. Camerasfọdụ igwefoto na-abịa na njirimara gụgharia dị ndụ, ebe ndị ọzọ na-elekwasị anya na nchekwa mpaghara yiri Dọkịnta Digital Voice. Ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere Nnyocha Researchlọ nyocha na Nnyocha Ọmụmụ Ihe Nchọpụta Ọkpụkpọ nke Mba (NJTR) mere ọtụtụ nyocha na kamera ahụ iji nyere òtù dị iche iche aka ịzụta nke kachasị mma. Agbanyeghị, ọmụmụ a kọwara ngwa ọrụ, arụmọrụ, GPS, ọdịyo na ụdị ndị ọzọ.
A na-eji ese foto ndị a na mpaghara dị iche iche, aha ha bụ ndị a:
Ejiri ndi aru ndi uwe ojii ndi uwe ojii ndi uwe ojii na ndi ozo idebe iwu ka ha nwee udo n’obodo ma obu n’ime uwa nile. Agbanyeghị, igwefoto ndị a ezubere ime ka mmekọrịta dị n'etiti ndị nkịtị na ndị uwe ojii. Ya mere, agbapụtara ọgbọ mbụ nke igwefoto uwe ojii ọhụrụ na-eyi na 2005 na UK. Agbanyeghị, a na-esite na 2014 gaa n'ihu site na nnukwu mmejuputa iwu na US iji mee ka ndị uwe ojii na-ekwupụta na nghọta. Mgbe nke ahụ gasị, ọtụtụ mba ndị ọzọ agbasola otu ụkwụ ma tinye onwe ha n'ọrụ na-aga n'ihu. Ihe omumu omumu omumu mbu di nma, mana ihe omumu nwere ihe nyocha. Egosiputara nsonaazụ a ụfọdụ akụkọ dịgasị iche dabere na mpaghara mpaghara yana ụkpụrụ nduzi nke kamera ahụ. Ọtụtụ ihe ịma aka gụnyere:
Ọgụ ndị agha
A na-eji kamera ahụ yi uwe na okpu agha na nzukọ agha. Agbanyeghị, enwere ike idobe vidiyo na mpaghara ma ọ bụ jigharịghachi na ọdụ ndị agha ma ọ bụ na mpụga ndị agha.
Ndị a bụ ụfọdụ uru ndị uwe ojii Police-Worn Cameras ịchọrọ ịgụ
Dabere na ndị ọrụ uwe ojii na-eji igwefoto ndị a na-ekwu na ha na -eme ndekọ na nghọta iji belata ime ihe ike ndị uwe ojii. Na mgbakwunye, ha chọpụtara na igwefoto ahụ na-enye ihe akaebe ha chọrọ igosipụta ma ọ bụ na-agbagha ebubo ebubo na-ezighi ezi, ha bụkwa ezigbo ngwá ọrụ maka ọzụzụ ndị uwe ojii na iji nye nchebe na nkwado ọha. Megide ikike ndị uwe ojii na-eji igwefoto ahụ na-ekwu na igwefoto ndị mebiri emebi metụtara n'ụzọ anụ ahụ na nke uche nke ndị ọrụ site na ịjubata ụdị ụdị akụrụngwa na nchekasị nke ndekọ vidiyo oge niile. Ka anyi bia rue ebe itughari uche banyere ihe oma ndi uwe ojii ndi eji aru ha eme.
N’enweghi ike, ndị mmadụ n’ụwa niile na-akpa arụ dị iche iche mgbe ha matara na a na-ese vidio ha. Yabụ, igwefoto uwe ojii nwere ike ịgba ndị mmadụ ume ịkpa ezi agwa maka na ndị uwe ojii na - eleghara iwu anya, a na - etinyekwa iwu a n'ihu ọha, na - eduga n'ịbelata ọnụ ọgụgụ mpụ, na - eme ka ịwakpo ndị agha ma mebie ndị mmadụ na - awakpo ndị ọrụ ọrụ. Dabere na ọmụmụ Rialto, oke nke mpụ 50% na-ebelata naanị n'ihi igwefoto uwe ndị uwe ojii na-eyi n'oge ikpe mbụ nke kamera ahụ uwe ojii. N'ụzọ dị ịtụnanya, mkpesa ndị uwe ojii mere na-akpaghị aka site na 28 ruo 3 n'ime afọ ikpe.
Nchedo nke ndị uwe ojii pụọ na ebubo ụgha na omume na-ezighi ezi
Dịka m kwuru n’elu, Ndị uwe ojii Body Won Camera (na mkpụmkpụ PBWC) na-enye ma ihe ọdịyo na vidiyo nwere ike gosipụta ihe mehiere n'oge enyere. Typedị teknụzụ a bara uru maka ndị otu abụọ dịka ndị ọrụ uwe ojii na Ọha. Ndị uwe ojii ọ bụla nwere ike ileba anya site na iji teknụzụ a na-akparị onye nkịtị ọ bụla, ebe a ga-ejide onye ọ bụla sitere na ọha na eze na-anwa ebubo ebubo ndị uwe ojii ọ bụla. Anyị na-agụ ya otu n'ime uru kachasị mma maka na ọ nweghị nchebe maka otu abụọ. Ọtụtụ ndị uwe ojii nọ na mba ndị ahụ ebe enwere teknụzụ a nyere ndị uwe ojii yana ndị ọha ntaramahụhụ n'ihi omume na-ezighi ezi.
Ngwá ọrụ dị mma maka mmụta na nwee nkwado na-esite n'aka ọha
Mgbe uru abụọ gachara, enwere ihe nke ato n’ime vidiyo nke edere n’aka ndị uwe ojii - Worn Cameras nwere ike iji zụọ ma ndị uwe ojii dị ugbu a na ndị uwe ojii ọhụụ. Ya mere, Ngalaba ndị uwe ojii Miami amalitela iji teknụzụ a wee kwupụta akụkụ nke akụrụngwa ndị uwe ojii kemgbe 2012. Naanị n’ihi iji kamera na-eyi uwe, ndị mmadụ na-enwe obi iru ala karị, omume ndị uwe ojii agbanweela kpamkpam n’ihu ọha. Ugbu a, ha na-agwa ndị mmadụ okwu ọma. N'ụbọchị ndị a, Nwere Igwefoto Kachasị Ahụ ike dị, gụnyere:
Obere igwefoto WIFI GPS / 3G / 4G Body Worn Camera
Ordingdekọ igwefoto Ndi Worn
Kaadị SD na-akwado Igwefoto Ahụ Worn Ara
Chekwabere Igwefoto Worn Kamara Enyi na Nzuzo + LCD
Ndị a niile bụ kamera ahụ mara mma nke ejiri nchekwa nchekwa pụrụ iche, ma ọ bụrụ na ị na-achọ inwe igwefoto dị otú ahụ ị nwere ike ịga omg-solutions.com. Nwere ike nweta ngwaahịa n’ime ha n’ahịa dị mma. Ọ bụ ezie na nzukọ jiri ya, a na-ahapụkwa ụmụ amaala ịnwe ya maka nchekwa ha. Dịka m kwuru n’elu, enweghị mkpesa na-emebi emebi dịka igwefoto ahụ a na-eyi, mana otu ọ ga-esi emetụta ahụ ike gị ma ọ bụ ike echiche. N'ime ụwa, ihe niile nwere ma ọghọm ma ọghọm ya, ọ bụrụ na anyị na-agbaso iwu ahụ, anyị na-enyocha na ndị uwe ojii Worn Body Cameras nwekwara ụfọdụ uru. Yabụ, lee ndepụta nke ọghọm (ngwa ngwa) ị ga - achọpụta.
Ndị kamera ndị a abụghị ndị a pụrụ ịdabere na ha ma dị oke ọnụ
Kpoo Nzuzo nke Ọha, kpughee ndị e merụrụ emerụ, Mmebi Mmebi nke Ọha na ndị uwe ojii
Iji Cameras, nchekwa nke ndị uwe ojii nọ n'ihe ize ndụ oge ọ bụla.
Uru nke iji igwefoto Mkpo Mkpuchi ahụ gbanwere ikpeazụ: September 26th, 2019 by admin
Nzuzo 2556 22 Echiche Taa
Ozi nke ọrụ (1)